Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa | Teta! Julaị–Ọgọst 2014
Ụlọ ọrụ na-elekọta ụmụ anụ bi n’ọhịa kwuru na malite n’afọ 1997 ruo afọ 2011, a hụrụ ọtụtụ osisi ọhụrụ na ọtụtụ ụmụ anụmanụ ọhụrụ n’ebe ndịda Eshia. A hụkwara otu ụdị ajụala anya ya na-acha ọbara ọbara. Ebe a hụrụ ihe ndị a dị nso na Kambodia, Laụs, Mianmaa, Taịland, Vietnam, na Chaịna. N’afọ 2011, a hụrụ ụdị osisi iri asatọ na abụọ, ụdị anụ na-akpụ akpụ iri abụọ na otu, ụdị azụ̀ iri na atọ na ụdị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dị iri.
Otu akwụkwọ akụkọ a na-ebi na Rọshịa kwuru na a na-eji ndị mmadụ atụ mgbere n’ọtụtụ ebe na Yurop. Ụfọdụ n’ime ndị ahụ bụ akwụna ka ha ga-aga gbawa, ndị ọzọ ga-agbawa ohu. E nwekwara ndị nke a na-egbu ka e wee ree akụkụ ahụ́ ha. Ndị ndị omekome a na-enwetakarị bụ ndị dara ogbenye, ndị na-enweghị ọrụ nakwa ụmụ nwaanyị.
E nwere ndị mere nchọpụta gbasara ụmụaka ndị na-elekarị tiivi. Ha kwuru na ụmụaka ndị ahụ na-akpakarị àgwà ọjọọ ma ha tolitewe. Ihe a ha kwuru kwadoro ihe otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụmụaka n’Amerịka kwuru. Ha sịrị na ụmụaka ekwesịghị ịna-ele tiivi karịa otu awa ma ọ bụ awa abụọ kwa ụbọchị.
Ọtụtụ n’ime obodo ndị dị n’Alaska dị n’ikpere mmiri. Ọ bụ ya mere idei mmiri ji akpa ha aka ọjọọ. Nchọpụta e mere gosiri na ihe kacha eme ka ihe ka njọ bụ okpomọkụ. Otú ebe ahụ sizi ekpo ọkụ ugbu a na-eme ka aịs gaara egbochi idei mmiri na-agbaze, bụ́kwanụ ihe na-eme ka idei mmiri na-akpa mkpamkpa n’udu mmiri.
Kemgbe ụwa, ihe ndị na-enye ọkụ na-emetọ ikuku maka anwụrụ ọkụ ha na-akwụ. Ma n’oge na-adịbeghị anya, a malitere iji ihe ndị na-agaghị na-emetọ ikuku enye ọkụ, ihe ndị dị ka oké ifufe ma ọ bụ anyanwụ. N’agbanyeghị mbọ a niile a na-agba, otu nwaanyị aha ya bụ Maria van der Hoeven kwuru na ihe na-ebenụ ka na-ebekwa maka na ihe ndị ahụ na-emetọkwa ikuku.
Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Julaị–Ọgọst 2014
mailto:?body=Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Julaị–Ọgọst 2014%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102014162%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Julaị–Ọgọst 2014